How'd it happen and more reports?: မဲပေးနိုင်မည့်သူ အမည်စာရင်းအား ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ယနေ့တွင် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်
အမည်စာရင်းအား ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်တွင် စတင်လွှင့်တင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ အမည်စာရင်းတွင် သင့်အမည်နှင့် သင့်မိသားစုဝင်များ၏ အမည်ပါ မပါ ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့လွှင့်တင်လိုက်သော ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ မြို့နယ်အချို့သာ ပါဝင်ပြီး အခြားမြို့နယ်များမှ အမည်စာရင်းကို ဇွန်လတွင်ထပ်မံ ထည့်သွင်းသွားမည်ဟုသိရပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ လင့်(ခ်)တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှု၍ မိမိမှတ်ချက်များကိုရေးသားနိုင်ပါသည်။
The Union Election Commission today launchedaweb site which allows you to check whether your name and your family’s names are on the voter list. At the moment this works for Yangon. Other townships will be added during June. Check it out and post your comments. https://checkvoterlist.uecmyanmar.org/
Posted by Ko Nge at Wednesday, May 27, 2015